KORBATANE 5 version 2015 par Utilisateur - Fichier PDF
KORBATANE 5 version 2015 .pdf
Nom original: KORBATANE 5 version 2015.pdfAuteur: Utilisateur
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 13:00, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 544 fois.
Korbatane 5 version 2015
taona faha-15 (2001 – 2015)
taona faha 15 (2001 – 2015)
Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra
ihany no ezahina. Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery tao anatin’ireo fotoana
fohy nananana mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manampaharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2015 ity.
Ialana tsiny mialoha izay mety tsy fahatomombanana satria ny tena tsy matihanina
(professessionnel na mivelona) amin’ny fampielezana ny finoana fa mbola tsy maintsy mitady izay
hohanina aloha ka izay no tsy dia ananana fotoana ampy handalinana sy hikarohana zavatra maro. Fa
na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay mba hanomezan’i Allah saina sy
fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina kokoa amin’ny fikarohana atao.
Ny Dhya-ous-S’alihin no nofidiana nakana ny ankamaroan’ireo zavatra resahana ato satria
azo inoana fa maro no efa manana ny boky Mafaatihoul djinan. Iangaviana ihany koa isika tsirairay
mba hizara amin’ny namana mba samy hahazo tombotsoa eto amin’ny fiainana an-tany sy ny any
P.S. : ekena fa mbola misy fanatsarana maro tokony hatao amin’ity boky kely ity saingy efa ankatoky
ny volana isika koa dia voatery nofaranana…
Ny volana Sha’abany dia volana iray isan’ny manan-danja tokoa satria
volan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S). Izy dia nifehy mandritra an’ity
volana ity ary mitohy avy hatrany amin’ny volana masina Ramadhany (Izany hoe
roa volana misesy).
Hoy indrindra ny Mpaminany Mohammad (S) : «Ny sha’abany dia volanako ka
na iza na iza mifehy andro iray amin’izany dia tsy maintsy hiditra ny paradisa ».
navorin’ny Imamo as Sajjad (A) ireo mpanaradia azy ary hoy izy
amin’izany …Fantatrareo ve ity volana ity ? Ity ilay volana nambaran’ny
Mpaminany (S) hoe ‘VOLANAKO ITY’ . Koa mifeheza amin’ity volana ity
amin’ny fitiavana an’ilay Mpaminaninareo (S) sy fanantonana bebe kokoa ny
Tomponareo. Mianiana amin’ilay mitana ny fanahiko aho fa naheno ny Imamo
Houssen (A) nilaza fa NA IZA NA IZA MIFEHY AMIN’NY VOLANA SHA’ABANY
NOHO NY FITIAVANY NY MPAMINANY SY HO FANAKAIKEZANA AN’I ALLAH DIA
HO TIAN’I ALLAH IZY ARY HAMPANAKAIKEZINY NY FAMINDRAM-PONY AMIN’NY
ANDRO FARANY KA TSY MAINTSY HAMPIDIRINY NY PARADISA ».
Voalaza ihany koa fa ny Mpaminany Mohammad (S) rehefa miseho ny
tsinambolana Sha’abany dia niantso an’ireo mponin’i Yathrib (Madina) hoe :
« Izaho dia irak’i Allah ho aminareo. Fantaro fa ny volana Sha’abany dia ahy.
Ary Allah dia mandefa ny indrafony amin’izay mandray anjara miaraka amiko
amin’ny fifehezana amin’ity volanako ity »
nanambara ny fifehezana amin’ny volana sha’abany dia nifehy foana aho ary
raha sitrak’i Allah dia mbola hanao izany mandrapahatapitry ny fofon’aiko
satria ny Mpaminany (S) dia nanambara fa ny fifehezana roa volana misesy dia
fibebahana amin’i Allah ».
Raha sanatria ka tsy afaka mifehy iray volana manontolo dia miezaha
mifehy amin’ny telo andro farany mitohy avy hatrany amin’ny volana
Ramadhany fa voalaza fa izay manao izany dia ho voasoratra ho toy ny nifehy
roa volana misesy. Fa tokony hifehy ihany koa ny telo andro voalohany no sady
manao s’alat raka’at 2 rehefa alina ny andro izay voaresaka ao amin’ny alina
Ireo asa fanompoana tokony atao isan’andro
ُ ‫هللا َو أَت ُ ْو‬
Astaghrfiroul-laahal-lazhy laa ilaaha il-la houwa
Ar-rahmaanir rahyimi , al hay-youl quay-youm
wa atoubou ilayh
3. Manao sadaqa na dia antsak’antsendry (datte) aza mba ho voaaro
amin’ny afobe ny vatana.
4. Miteny hoe :
5. Manao salawatou maro faran’izay tratra.
In www.al-islam.org/fr anthologie des clés des paradis (Mafatih al jinan)
S’alat fanao isaky ny andro Alakamisy mandritra ny volana sha’abany
Raka’at 2 ka isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 100.
Hotanterahan’i Allah ny faniriany rehetra mahakasika ny fiainany an-tany sy ny fiainana
ankoatra. Ary izay mifehy andro iray amin’izany andro izany (Alakamisy) dia hataon’i Allah ho
haramo ho an’ny afo ny vatany.
isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Taohid 15 dia homen’i Allah valisoana
maritiora 12 000 sy ho soratana ho azy ny fanompoana mandritra ny 12 taona sy ho
afaka amin’ny fahotany izy sahala amin’ny andro niterahan’ny Reniny azy ary hahazo
lapa mitovy isa amin’ny ayat-ny kor’any any amin’ny paradisa ».
mamaky Fatiha 1 + Taohid 30 isaky ny raka’at ary rehefa vita ny salamo dia miteny
hoe : Al-lahoum-ma hazha a’hdy indaka ila yaoumoul qyiaamah
‫ع ْهدِي ِع ْندَكَ ِإلى يَ ْو ُم ال ِقيَا َم ِة‬
َ ‫الل ُهم َهذَا‬
 Harovan’i Allah amin’ny haratsian’ireo mponin’ireo lanitra sy ireo tany
rehetra ; amin’ny haratsian’i Iblis sy ireo miaramilany rehetra ary ireo
mpitondra tsy manjary rehetra .
 Manao fifehezana mba hahazoana ny paradis, ary mitandrina mafy koa amin’ny
« Izay olona mifehy amin’ireo telo andro voalohany amin’ny volana sha’abany ary
rehefa alina ny andro dia manao s’alat raka’at 2 ka mamaky Fatiha 1 + Taohid 11
isaky ny raka’at (atao isan’alina mandritra isaky ny harivan’ny andro ifehezana) dia:
hamafana 70 000 isa ireo fahotana goavana vitany izay teo anatrehany sy
Allah Ilay henin-kaja sy henim-boninahitra ;
Ity s’alat ity araka izany dia tokony hatao amin’ny alina faharoa ary averina amin’nyy fahatelo
mpitarika ny tanoran’ny paradisa dia tsy iza fa ny Imamo Houssen (A) izany. Marobe ireo
zavatra tokony hatao amin’izany. Indreto misy vitivitsy notsongaina :
amin’ny finoana sy ireo andro nahafaly ireo Ahloulbayt (A) na koa rehefa mahatsapa
fa nahazo fahasoavana avy amin’ilay Nahary sy izay rehetra tokony hisaorana azy. Toy
izao ny momba azy :
fasany rehefa tonga ny andro fitsanganana hiteny izy amin’izany fotoana izany hoe
ASH-HADO AN LAA ILAAHA ILLA ALLAHOU WA ASH-HADOU AN-NA MOUHAMMADAN A’BDOUHOU
 Araka ny voalazan’ny Mpaminany (S) « tsy misy mpino lahy na vavy nanatanteraka
an’ity s’alat ity raha tsy ho valian’i Allah ny fangatahany sy hotanterahany ireo
 Na dia mitovy amin’ny ranomasimbe aza ny fahotany dia tsy halain’i Allah eto an-tany
izy raha tsy efa madio ;
 Isaky ny ayat novakiana dia hahazo valisoana maritiora 12 amin’ireo maritioran’ny
badr, sy valisoan’ireo manam-pahaizana.
 Hotenenin’i Allah ireo anjely hoe : « hanoratanareo fahasoavana iray hetsy izy, ary
akaro iray hetsy ny toeram-boninahiny (grady), hanokafy varavarana iray hetsy koa
ary aza hidina aminy intsony mandrak’izay doria amena ».
Nianiana tamin’ilay nanao azy ho Mpaminany tamin’ny fahamarinana fa tsy manao an’ity
s’alat ity raha tsy olona feno finoana (imaan). Isaky ny ayat novakiana dia homen’i Allah
zaridaina iray amin’ireo zaridainan’ny paradisa.
Ho fafan’i Allah ny fahotana nandritra ny efapolo taona ;
Hampiakarina laharam-boninahitra 40 ;
Hisy anjely 40 000 (efatra alina) hangatam-pamelana ho azy ;
Hahazo valisoan’ny olona sendra ny laylatoul qadr.
Manao an’ireo s’alat voalaza fanao isaky ny alina faha-13 amin’ny volana silamo. (in
KORBATANE N° 4) hita ao amin’ny mafatihoul djinan sy ity boky dhya-ous-s’aalihin ity koa.
Manao an’ireo s’alat voalaza fanao isaky ny alina faha-14 amin’ny volana silamo. (in
KORBATANE N° 4)
 Rehefa hatsangan’i Allah izy dia hahazo hazavana avy amin’ny masoandro sy volana
ny tarehiny ;
aorian’ny laylatoul quadr . Amin’ity alina ity no fitsinjarana ny riziky, ny fanoratana ny
androm-piainan’ny olona tsirairay sy ireo voahosotra hanao hadj na fivahiniana masina any
Lameka koa dia miezaha hanakaiky an’i Allah bebe kokoa mandritra an’ity fotoana ity satria
alina fanaovana an’izany ity ary Izy dia maheno ny antson’ireo rehetra miantso azy.
tamin’ny alina 15 sha’abany.
َ َ‫الل ُهم إِنك‬
ُ‫ع ِل ْي ٌم ذ ُْو أَنَا ٍة َو ال َطاقَةَ لَنَا بِ ِح ْك َمتِكَ يَا هللاُ يَا هللا‬
ّ ‫يَا هللاُ األ َما ُن األ َما ُن األ َما ُن ِمنَ ال‬
َ ‫طاعُ ْونَ َو‬
ِ ‫ش َماتَ ِة األ ْعد‬
ِ ‫َاء َربنَا ا ْك‬
َ‫ ُم ْوقِن ُ ْون‬/ َ‫اب إِنّا ُم ْؤ ِمن ُ ْون‬
Al-lahoum-ma in-naka a’lyimoun zhou anaa-tin wa la t’aa-qata lanaa
bihikmatik, Ya Al-laah, ya Al-laah, ya Al-laah, al amaa-nou, al amaa-nou,
al amaa-nou mina-t-t’aa-ou’n wal wabaaa-i wa mawtal foudja-aty, wa
sou-il qadhaaa, sa shamaa-tatil a’adaa, rab-banaa-k-shif a’n-nal azhaaba
in-naa mouw-minoun/ mouqinoun.
Alohan’ny hanaovana s’alat al isha dia manao s’alat raka’at 4 ka isaky ny raka’at dia
mamaky Fatiha 1 + Taohid 10 (misy riwayat milaza fa 11)
Ya rab-bi-ghrfir lana 10
Ya rab-bi toub a’layna 10
Mamaky ny sorato at-Taohid 21
Avy eo SOUBHAANA-L-LAZHY YOUH-IL
A’LA KOUL-LI SHAY-IN QUADIR 10
MAWTA WA YOUMITOUL AHYA, WA HOA
 Hovalian’i Allah ny fangatahany ary ho tanterahany ireo
faniriany eto an-tany sy any ankoatra ;
Avy eo mamaky an’ity doua ity :
Nazh’arta ilayhi fa rahimta, wa sami-en-ta doua’a –aho fa adjabtahou,
Wa-dj’a’lni mim-man salima fa naï’ma, wa faaza faghranima ,
4. Aorian’izany rehetra izany dia mamaky an’ity doua ity (izay vakiana isan’andro
aorian’ny s’alat as shaf’i, amin’ny s’alat al layl (vavaka mamatonalina in Korbatane
N° 7) :
Fa in konta ya mawlaya fy hàzhihil laylaty a’la ahadin min khralqik , wa o’dta a’laihy
bi-a’a-idatin min a’tfika, fas’al-ly a’la Mohammadin wa aalihy at-t’ay-ybiina att’ahiriina, al khrayriina al faadhiliin. Wa djod a’lay-ya bitaolika wa ma’aroofik, ya
rab-bal a’alamin. Wa s’al-lalaaho a’la khratimi-n-nabiy-yna wa aaalihy-t-t’aahiriin
wa sal-lama taslima. In-na Allaha hamidon madjid. Al-lahom-ma in-ny ad-o’ka
kamaa amartany fastadjib ly kamaa wa’adtany in-naka la tokhrlifol mi-a’ad.
‫صدَكَ ِف ْي ِه‬
َ ‫ َو َق‬، َ‫ض لكَ ِف ْي َهذا الـ ْيل ا ْل ُمتَ َع ِّرض ُْون‬
َ ‫إلـَه ْي تَ َعر‬
ْ ‫ َو أم َل َف‬، َ‫اصد ُْون‬
‫ َو لَكَ فِ ْي َهذا الـ ْيل‬، َ‫ضلَكَ َو َم ْع ُر ْوفَكَ الطـا ِلبُ ْون‬
ِ َ‫ا ْلق‬
‫علَى َم ْن تَشَا ُء ِم ْن‬
َ ‫ تَ ُم ّن ِب َها‬،‫ب‬
َ ‫ َو‬،‫ َو َج َوائِ ُز‬، ُ‫نَفَ َحات‬
َ‫ع ْبد ُك‬
َ ‫ َو َها أنَذا‬، َ‫س ِب ْق لَهُ ا ْل ِعنَايَة ُ ِم ْنك‬
ْ َ‫ َو تَ ْم َنعُ َها َم ْن لَ ْم ت‬، َ‫ِعبَادِك‬
ْ َ‫ ف‬، َ‫ضلَكَ َو َم ْع ُر ْوفَك‬
ْ َ‫ ا ْل ُم َؤ ّم ُل ف‬، َ‫ا ْلفَ ِق ْي ُر إلَ ْيك‬
‫ي تَفَض ْلتَ ِف ْي‬
َ َ‫إن كُ ْنتَ يَا َم ْول‬
، َ‫ع ْط ِفك‬
َ ‫علَ ْي ِه ِبعَائِدَ ٍة ِم ْن‬
َ َ‫ َو عُ ْدت‬، َ‫َه ِذ ِه الّيلَ ِة عَلى أ َح ٍد ِم ْن َخ ْل ِقك‬
‫ َو ُج ْد‬، َ‫اضل ْين‬
ِ َ‫ص ّل عَلى ُم َح ّم ٍد َو آ ِل ِه الطـ ّ ِي ِبنَ الطـّا ِه ِر ْينَ ال َخ ِيّ ِر ْينَ الف‬
‫صلّى هللاُ عَلى ُم َح ّم ٍد‬
َ ‫ َو‬، َ‫ب ا ْل َعالَم ْين‬
ّ ‫ َيا َر‬، َ‫ي ِب َط ْو ِلكَ َو َم ْع ُر ْو ِفك‬
ّ ، ‫س ِل ًما‬
ٌ ‫اّلل َح ِم ْيد‬
ْ َ‫سلّ َم ت‬
َ ‫َخاتَ ِم النّبـِيـِّ ْينَ َو آ ِل ِه الطـّيِ ِبنَ الطـّا ِه ِر ْي َن َو‬
َ ّ ‫إن‬
‫ع ْدتَـنِ ْي‬
ْ ‫ اللـ ّ ُه ّم إنـِّ ْي أ ْدع ُْوكَ َك َما أ َم ْرتـَـ ِن ْي فَا‬، ٌ ‫َم ِج ْيد‬
. َ‫ف ا ْل ِم ْي َعاد‬
ُ ‫إنـّكَ ال ت ُ ْخ ِل‬
‫ الل ُهم‬،‫ستَ ِج ْي ٌر‬
َ ‫ َو ِم ْن‬، ‫الل ُهم إِنِّ ْي إِلَ ْيكَ فَ ِق ْي ٌر‬
،‫ َو ال تُش ِْمتْ بِي أَ ْعدَائ‬،‫س ِم ْي‬
ْ ‫ َو ال تُغَيِّ ْر ِج‬، ‫س ِم ْي‬
ْ ‫ال تُبَ ِّد ْل ا‬
َ ‫ َو أَع ُْوذ ُ بِ َر ْح َمتِكَ ِم ْن‬، َ‫أَع ُْوذ ُ بِعَ ْف ِوكَ ِم ْن ِعقَابِك‬
َ ‫ َجل ثَنَاؤُكَ أَ ْن‬، َ‫ َوأَع ُْوذ ُ بِكَ ِم ْنك‬، َ‫س َخ ِطك‬
َ ‫َوأَع ُْوذ ُ بِ َرضاكَ ِم ْن‬
َ ‫َك َما أَثْنَ ْي‬
Al-lahoum-ma in-ny ilayka faquir, wa min a’zhaabika khraaa-ifoum moustadjiroun, allahoum-ma La toubad-dil ismi, wa la toughray-yir djismy, wa la tousmit bi a-an-daaai, a’oun-zhou bi-a’fwika min aïquaabik, wa a-oun-zhou birahmatika min a’zhaabik, wa
a-oun-zhou biridhaaka min sakhratik, wa a-oun-zou bika mink, djal-la thanaaa-ouk,
anta kamaa athnayta a’la nafsik, wa fawqa maa yaquoouloul qaa-iloooouuunn.
‫من الر ِح ْي ِم‬
ِ ‫هللا الر ْح‬
َ‫علَ ْيكَ يَا ذَا الط ْو ِل ال إله‬
َ ‫الل ُهم يَا ذَا ال َم ِّن ال ي ُ َم ُّن‬
ّ ‫ت ظُ ْه ُر‬
‫ست َ ِج ْير ْينَ َو أَما َ ُن‬
َ ‫إِ ّال أ َ ْن‬
ْ ‫الّل ِج ْينَ َو َجا ُر ال ُم‬
‫ش ِقيّا ً َم ْح ُر ْوما ً ُم ِق ّرا ً فِ ْي‬
ُ ‫ا ْل َخائِ ِف ْينَ إِ ْن كُ ْن‬
‫ار ِر ْزقِي َو‬
ِ ‫ال ِّر ْز‬
َ‫ت فَ ِإنك‬
ِ ‫اثْبِتْنِي ِع ْندَكَ َم ْر ُز ْوقا ً ِع ْندَكَ ُم َوفِّقا ً ِل ْل َخ ْي َرا‬
َ َ‫ق ُ ْل َت فِ ْي َكتَابِكَ ا ْل ُم ْن َز ِل يَ ْم ُحو هللا ُ َما ي‬
ِ‫َو ِع ْندَه ُ أُم ُّ ال ِكتَاب‬
( in sorato 13 « Ar Ra’ad » , Ayat 39)
Ity alina ity dia isan’ireo alina 4 tsy tokony hanakakaizana fandriana mihitsy. Ny
fiarahana amin’ny vady dia voarara amin’ity alina ity. Raha misy mandika izany ka
Masina (S) tamin’ny Imamo Ali (A) izay niresahany ny momba ny fombafomba sy
fotoana firaisan’ny mpivady. Ho hitantsika ao aoriandriana kely ao amin’ny laharana
manokana mikasika ny tontolon’ny fanambadiana ahitana manontolo an’io hafatra
lava dia lava io amin’ny teny arabo (version originale ao amin’ny Makarim al
Akhrlaq) sy ny dikany amin’ny teny malagasy, miampy izay mba kely vokatry ny
fikarohana momba an’izany tontolon’ny fanambadiana izany (oh : ny fomba atao
hahazoana taranaka tsara, ny doa vakiana, ny sorato vakiana ary ny sakafo hanin’ny
vehivavy manomboka amin’ny volana voalohany iforonan’ny zaza ka hatramin’ny
fombafomba sy doa atao hahamora ny fiterahana sy ny fomba atao rehefa teraka ny
zaza ….) somary matevitevina ihany izy io fa dia mangataka doa mba hanana
fanambinana hahatanteraka azy soa amantsara ho tombotsoantsika mpanaraka
an’ireo Fianakaviana Masin’ny Mpaminany Mohammad (S).
 tsy misy mpanompo tsy hovoafaritra amin’io alina io izay zavatra momba azy
na ny tsara na ny ratsy manomboka amin’ny sha’abany ka hatramin’ny
faran’ny taona, mandrapitsingerin’ity alina ity indray amin’ny taona
«Rehefa mahay tsianjery an’ity doua ity ianao dia miantsoa ny Tomponao amin’ny alalany
isaky ny alina hifoha Zoma, na indray mandeha isam-bolana, na isan-taona na indray
mandeha ao anatin’ny fiainanao fa hahazo fanampiana sy riziky ianao no tsy ho tapaka
famelankeloka. Ô ry Koumail ! …
(misy natao mitokana azo avoaka amin’ny taratasy ho an’izay tsy manana boky).
8. doa tawas-soul,
 Raha ohatra ireo Ray aman-dReniny ka lasa any amin’ny afobe dia havoakany avy
any izy roa ireo.
Hesorin’i Allah avy ao amin’ny fony ny fisandohana (‫ ) الغش‬sy ny ‫) الغل‬, ho isan’ireo nosokafan’i
Raka’at 10 isaky ny raka’at dia mamaky Fatiha 1 + Takaa-hour 1
*in sorat al baqara, ayat roa farany.
 Hanoratan’i Allah fahasoavana iray tapitrisa (1.000.000) ;
 Hofafany ny hadisoana mitovy isa amin’izay ;
 Hasondrony grady mitovy isa amin’izay koa ;
 Hiaraka amin’ny satro-boninahitra vita avy amin’ny hazavana izy hiatrika an’ilay
Dia mirary fahombiazana ho antsika tsirairay avy. Amin’ny laharana manaraka
iresahana ny volana masina Ramadhany indray e. Ezahana ny hampiditra an’ireo doa isaky ny
andro tsirairay amin’izay volana Ramadhany izay sy ilay salawat lava dia lava vakiana isaky
ny andro Zoma sy isan’andro amin’ny volana Ramadhany.
Raha maniry hanana tahiry dia aza misalasala manortra amin’io adiresy io fa handefasana
maimaim-poana livre numérique fa monde numérique izao no malaza.
KORBATANE 5 version 2015.pdf (PDF, 1.8 Mo)
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00417068.